Ifulethi elikahle ongachitha amaholide akho! itholakala ePraia da Amorosa e Viana do Castelo 2 imizuzu ukuhamba ukusuka ogwini, 5 km ukusuka edolobheni elihle. Ifulethi lisesitezi sesi-4 (enekheshi) kanye negalaji langasese elingena kalula. Kule ndawo ungajabulela indawo yemvelo, ezolile futhi enokuthula ukuze uphumule kahle. Ungavakashela idolobha laseViana do Castelo elinamaphuzu amaningana anentshisekelo yomlando namasiko. Siyakwamukela!
Kuyinto efulethini 2 emakamelweni ngasinye umbhede double, ikhishi ifakwe (isitofu, kuhhavini, microwave, Umshini wokuwasha izitsha, umshini wokuwasha, dryer, ikhofi machine, into yokucocobalisa, iketela, efrijini futhi efrijini) i yokugezela nge ubhavu (gel okugeza, imoto, amathawula, iphepha nokomisa izinwele) kanye negumbi lokuhlala elinosofa, i-TV ne-wi-fi. Ifulethi lisha futhi linokushisa okuphakathi.
I-Amorosa iyindawo ethule, enemakethe encane iminithi elingu-1 ukusuka efulethini, isitolo sokudla kanye nobhishi elinamakhefi amaningana nezindlela zokuhamba. Yindawo eluhlaza lapho ungaxhumana khona nemvelo, uhambe izintaba, ubuke ukushona kwelanga ngasolwandle nokugibela amabhayisikili.
Ngiyatholakala nganoma imiphi imibuzo futhi ukukwazisa ngalokho ongavakashela edolobheni Viana do Castelo.